Home Wararka Xasan Cali Kheyre oo Nairobi kula kulmay diblomaasiyiin Ruush ah
Xasan Cali Kheyre oo Nairobi kula kulmay diblomaasiyiin Ruush ah
RW hore Xasan Cali Kheyre oo ka mid ah milkiilayaasha saamiga ku leh SOMAOIL ayaa safaarada magaalada Nairobi aay ku leedahay Ruushka kula kulmay diblomaasiyiin Ruush ah. Kheyre oo ka mid ah murashaxiinta u taagan kursiga ugu sarreeya masiirka Soomaaliyeed ayaa dardar gelinaya ololihiisa Doorashada kaddib markii aay Dowladda Mareykanka u diiday Fiisaha dal ku galka dalkeeda usbuucii hore.
Kheyre oo xiriir hoose la leh Dowladda Ruushaka ayaa la rumeysan yahay in uu kala hadlayay halka uu marayo ololihiisa Doorashada.
Kheyre oo ahaa RW ugu horreeyay uu xilka u magacaabo Madaxweynaha Muddo xileedkiisa dhammaaday ayaa la rumeysan yahay in uu ku jiro galaangal siyaasadeed, kaddib markii aay soo baxday fadeexado hareereeyay ololihiisa oo aay ugu horreysay go’aankii uu Golaha wasiirada ku raalli geliyay Cabdikariin Muuse Qalbi Dhagax iyo ururka gobonima doonka Soomaaliyeed ee ONLF. Xukuumadda Kheyre ayaa la aaminsan yahay in aay ka danbeeysay dhiibistii Qalbi Dhagax taasoo shaki weyn sii abuurtay markuu ka aamusay go’aankii Golaha Wasiirada.
Kheyre ayaa la aaminsan yahay in aanu lahayn wax fursad maadaama uu ahaa shaqsigii uu Farmaajo u isticmaalay caburinta siyaasiyiinta, iyo cunaqabateynta ganacsatada Soomaaliyeed saddexdii sano iyo barkii uu hayay kursiga xafiiska Raisul Wasaaraha JFS.
Lama oga sida aay uga falcelin doonaan diblomaasiyiinta reer galbeedka la kulanka Kheyre ee uu la kulmay diblomaasiyiinta Ruushka ah, taasoo loo badaniyo in qeyb ka tahay xayiraadda aay Dolwadda Mareykanka saarta Kheyre.
Previous articleJabuuti oo ogolaatay inay dib u soo celiso Dowladda Cusub hanti ay u heysay Soomaaliya
Next articleQoor Qoor oo xulida CC ku xalaaleeyay boobkii iyo musuqii ka dhacay dhuusamareeb
Donald Trump & Joe Biden oo yeeshay doodii ugu horeysay